Nei Tekinoroji Iri Kuva Yakakosha Kubudirira Kweresitorendi | Martech Zone
Nei Tekinoroji Iri Kuve Yakakosha kune Kubudirira Kweresitorendi
Chipiri, Gunyana 29, 2015 Svondo, Gunyana 27, 2015 Douglas Karr
Tine podcast inoshamisa iyo ichaburitswa munguva pfupi naShel Israel nezvebhuku rake, Rupo Rwakavimbika. Imwe yenyaya dzakandirova mukati mehurukuro yaive mangani matekinoroji akaitwa kuti awedzere kugadzirwa uye kunyatso kukomberedza vatengi chaizvo ingoisa iyo kudzora kwekutengesa mukati memaoko emutengi.
Pamwe hapana rimwe dambudziko rakakura kupfuura kumhanya yakabudirira nzvimbo yekudyira nhasi Pakati pesimba remagetsi, mutero wemushandi, mirau, uye miriyoni zvimwe zvinhu zvinogona kupokana neresitorendi - izvozvi takapa simba kune wese mutariri kuti aongorore nzvimbo yekudyira online. Handisi kuti icho chinhu chakashata - asi chiitiko cheresitorendi hachisi chinhu chipfupi nechishamiso chekuita kuti chinakidze zvachose. Kana iri nzvimbo yekudyira huru, vanhu vachanyunyuta nezvekumirira uye nebasa. Kana chiri chikafu chinoshamisa, zvinogona kunge zvakatora nguva yakareba kuti usvike patafura yako. Kana iri husiku husina kujairika, vashandi vanogona kunge vari vapfupi uye vasingatarise.
apo tekinoroji iri kubatsira varidzi venzvimbo iri kuburikidza nekupa simba vatengi kuti vatungamire. Heano mapfumbamwe tekinoroji dzakasiyana dzisiri kungobatsira - asi dziri kuve dzakakoshesa chiitiko cheresitorendi:
Social Media - pane kumirira kubvarurwa paYelp, ichipa peji rezvemagariro paunogona kuvhura nhaurirano nevatengi uye nekuvachengeta vachidzoka ibhizimusi rakanaka.
Website - wedzera menyu yako, mepu ine madhairekisheni, maawa, nhamba yefoni… kana kunyange vhidhiyo yepamhepo pamhepo kuitira kuti vatengi vakwanise kuwana rubatsiro rwese rwavanoda.
Ongorora Sites - chengeta yako data nyowani uye upindure kune mhinduro pane dzinoongorora saiti.
Blog - vazhinji vanochengetera mari vakakura munharaunda, vachibatsira kutsvagisa mari kana kufambisa nguva. Rega vanhu vazive zvakanaka zvauri kuita ne blog!
Wifi-fi - ita kuti vechidiki vafare uye deredza izvo zvinoita sekumirira kwenguva refu nekubvumira vatengi kuti vawane online. Mamwe masisitimu anotendera iwe kutora dhata rekunyora kune avo vanoshandisa yako wi-fi kuitira kuti ugone kuvawana pane yako email rondedzero.
Kuchengetedzwa kwepamhepo - unomboratidza uye zita rako harisi pane rezita rekuchengetedza? Wedzera online kuchengetedza kuitira kuti vanhu vagone kuvimbiswa kuti ivo vari muchirongwa uye vazive nguva yekuratidzira.
Nhare yekuraira - kufambira mberi muhunyanzvi kuri kuita kuti zvikwanisike pakuburitswa pamhepo, kutora-kunze, uye kunyangwe tafura yekuraira kutorwa kuburikidza nharembozha. Mirairo inogadzirwa nemutengi inogara yakarurama!
Dhijitari Coupons - SMS uye mameseji mamakoni, maemail coupon uye mapurogiramu ekuvimbika anochengeta vatengi vachidzoka.
Kuzviongorora - hapasisina kumirira cheki. Kuisa hwendefa ine maemail risiti rega vanhu vabhadhare uye vasiye vashoma kumashure nekudzoka nevashandi vako.
Vatengi vemaresitorendi vanoda tekinoroji nekuti ivo vanoienzanisa neiyo inokurumidza sevhisi uye, pakupedzisira, iri nani yekudyira chiitiko. Vari kutsvaga yako saiti, kunyangwe kana iwe usina kana-fi, kuchengetedza, uye kurongedza nhare. Ivo vari kuverenga wongororo uye kutarisa ako enhau midhiya chiteshi. Uri kuvakunda mukati netekinoroji here kana kurasikirwa navo kumukwikwidzi?
Tags: digital makuponikuodha kwemaokomaresitorendi maapplicationnzvimbo dzekudyira mablogresitorendi nhare yekurairayekudyira online kuodhaongororo yeresitorendimuresitorendi vezvenhauyekudyira tekinorojiyekudyira webhusaitiyekudyira wi-fisms makuponitafura yekubudatafura yekuchengetedza
Isu Tinodzokororazve Zvemukati Zvakabudirira
Iyo Bhenefiti Yekushandisa Hwendefa Pepa Yekutengesa MaSystem Mu-Chitoro
Gumiguru 6, 2015 na1: 52 PM
Yakanaka infographic. Ndinoshanda neREVTECH Accelerator muDallas iyo inonyanya kuunza hutsva pamusika weRestaurant, Retail & Hospitality industries. Isu tiri kuona mukana wakakura nekutanga-ups yakatarisana nekukura kwekudyidzana kwevatengi. Nguva dzinonakidza. Maita basa nenyaya yenyu.
Gumiguru 6, 2015 na11: 24 PM
Maita basa nekutora nguva kuti musvike! Ndosaka maita basa iri!
Nov 28, 2015 na1:30 AM
Tiri kuita nharembozha mumaguta emunyika akabudirira zvikuru ekutandarira - Miami, uye varidzi veresitorendi vakanyanya kutarisisa mukutengesa-mu-app nevatengesi vakaita seEat24 uye Postmates. Vamwe varidzi zvakadaro vanosarudza kuvaka maapplication avo, sezvo izvo zvinochengetedza mari pa% komisheni nekufamba kwenguva.